Ebe Ntanetị Online na Norwegian - Codes Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị Ịntanetị Norwegian
(543 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ...Ịgba chaa chaa anaghị enwekarị mmasị na ya Norway. Na '40s na' 50s, ọbụla ka ọha mmadụ kwadoro kaadị egwuregwu dị mfe. Ugbu a Norway nwere ụlọ ọrụ abụọ nwe obodo, ndị nwere ikike inye ndị Norwegian ịgba chaa chaa. Norsk Tipping na-achịkwa lotteries, ịkụ nzọ egwuregwu na egwuregwu n'egbughị oge, Norsk Rikstoto na-achịkwa ịkụ nzọ n'egwuregwu ịnyịnya. Ulo na-ewu ewu na obodo ahụ, ma a machibidoro ha na 2007, wee weghachite ha n'ụdị vidiyo vidiyo nke chọrọ kaadị kaadị. A na-ejikọ kaadị ndị a na ndekọ ego nke ndị egwuregwu ma na-erubere oke ike.
Ịgba chaa chaa na Norway na Norway
Ịgba chaa chaa ịgba chaa chaa bụ iwu na Norway, ma ọnọdụ ebe a bụ ihe mgbagwoju anya. Norsk Tipping, ụlọ ọrụ steeti nke na-achịkwa ịkụ nzọ ịgba chaa chaa na egwuregwu niile na Norway, gara online na 2002. Ugbu a, nke a bụ naanị ebe nrụọrụ weebụ ebe ndị omeiwu Norwegian nwere ike itinye iwu egwuregwu, ebe ọ bụ site na December 2008 iji ọrụ nke ebe ndị ọzọ na-agba chaa chaa na Norway bụ iwu na-akwadoghị.
Usoro iwuchibido iwu gụnyere circuitry yiri iwu nke ịgba chaa chaa na United States - Norges Bank ekweghị ka o nyefe ego n'aka akụkọ Norwegian na akụkọ nke ndị na-agba chaa chaa. Otú ọ dị, gọọmenti na-ezube ịkwụsị igbochi ndị na-esi mba ọzọ abanyebeghị ya, ndị ọrụ ala ọzọ dị na ndị ọrụ mpaghara.
Ndepụta nke saịtị 10 Norwegian Online Casino
Egwuregwu ebe nrụọrụ weebụ na-anabata ndị ọrụ si Norway
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị nke na-anabata ndị si Norway, ma na-enye egwuregwu dị elu ma dị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ.
I nwekwara ike gụọ nyocha anyị banyere saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ nkwụnye ụgwọ dịnụ maka ndị egwu si Norway.
Ịgba chaa chaa na Norway
Taa, anyị na-aga njem anyị na mba Scandinavia na ụzọ anyị na-ada n'ala mara mma nke fjords, ebe mmiri mara mma, ice na polar auroras - na Norway. Obodo a dị ịtụnanya nke na-enwe obi ojoo adịghị ahapụ gị enweghị mmasị. Anyị na-eje ije n'okporo ámá Oslo, nakwa chọpụta otú ihe si aga na ịgba chaa chaa. Kedu ihe nzuzo na peculiarities na-eme mba a?
Norway - ntakịrị banyere mba ahụ na akụkọ ihe mere eme;
Egwuregwu casinos nke ala na-adịghị ugbu a ma ọ bụ iwu na-akwadoghị;
Ụlọ ọrụ abụọ «Norsk Tipping» na «Norsk Rikstoto» - na-enye ikike iduzi ịgba chaa chaa;
Ejiri otutu lotteries, ịkụ nzọ na ihe omume egwuregwu, kaadị uhie, keno, Poker ebe 2015.
Egwuregwu Online na mba:
A machibidoro casinos nile nke mba ọzọ ebe ọ bụ na 2010, ọtụtụ na-aga n'ihu na-egwu iwu na-akwadoghị, ebe ọ bụ na a gaghị egbochi ebe nrụọrụ weebụ niile;
norsk-tipping.no/kongkasino - naanị saịtị a kwadoro.
Oslo isi obodo Norwegian isi obodo Oslo na adreesị;
Ezigbo mmasị banyere Norway na ndị bi na ya.
Akụkọ mkpirikpi nke Norway
Norway bụ alaeze nke Northern Europe, nke dị na mpaghara ọdịda anyanwụ nke ebe obibi Scandinavian. Mba ahụ na-agụnye mgbasa dum nke obere agwaetiti.
Ikekwe, aha obodo ahụ sitere na Old Norse " Norðrvegr ", Nke pụtara" ụzọ nke ugwu. "E kwesịkwara icheta ya, ọnọdụ ihu igwe dị oke njọ nke mba ahụ fọdụrụ na ya n'akụkọ ihe mere eme. Mgbe afọ ice na ihe dị ugbu a Norway nwere ezigbo ihu igwe, ya mere ọ dị ọtụtụ.
Ma site na mmụba nke njupụta ala nke ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya, ọnụ ọgụgụ nke ụmụ nwoke na-achọsi ike maka aha na akụnụba. Ya mere, n'oge na-adịghị anya oge nke Viking meriri, ókèala nke ego ahụ ruru toro toro onwe ya.
Na 18-19 narị afọ Norway na-abịa n'okpuru nduzi nke ndị agbata obi Denmark na Sweden ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ala ala kwụụrụ onwe ya efunahụ ya. Ma na 1905 ihe ndị na-ewu ewu na-eme ka e nwee njikọ na Sweden na mba ahụ nwere ọbụbụeze. Ugbu a ọchịchị ọchịchị nke ọchịchị Norway, ezeaha ya bụ Harold V.
Ka anyị kwuo n'otu oge, ịgba chaa chaa na mba a dị nnọọ mma.Po jiri ya tụnyere mba ndị gbara ha gburugburu Sweden Finland bụ iwu kachasị njọ banyere ịgba chaa chaa. Ná mba ahụ, e nwere nanị ụlọ ọrụ 2 («Norsk Tipping» na «Norsk Rikstoto»), ndị ikike ka ha na-eduzi ịgba chaa chaa. Ọ bụ ya bụ ịgba, ịkụ nzọ n'egwuregwu na keno. Ha dị n'okpuru Ministry of Culture, nke na-esetịpụkwa iwu nke ya. Ndị a gụnyere afọ ole na ole ruo afọ 18.
Ngwongwo oghere na Norway nwere ngwa ngwa na 2001-2004, ma na 2007, gọọmentị gosipụtara njikwa siri ike nke ogo ha ma belata ọnụ ọgụgụ ha. Ịgba chaa chaa n'Ịntanet enweghị ọganihu kachasị mma: ebe ọ bụ na June 2010, ndị isi isi mba ndị a machibido iwu na Norway, na ụlọ akụ na-egbochi ego niile na kaadị akwụmụgwọ na Norwegian online casinos gburugburu ụwa.
N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi onye ọzọ na-egwu egwu n'ụlọ, mgbe ahụ gị maka na ọ gaghị adị. Ma ọ bụrụ na ọ ga-adị n'usoro n'usoro iwu na ndị ọrụ mmanye nyere gị ọrụ azụmahịa - ị ga-akwụ ụgwọ gị ụgwọ. N'ihi ụdị ịgba chaa chaa a na akụkọ mgbasa ozi na-emekarị ka akụkọ akụkọ banyere ịwakpo egwuregwu na ịgba chaa chaa na-agba chaa chaa, na ndị nwere mmasị na-egwuri egwu na mpụga obodo ahụ.
Oslo ebe nkiri
Egwuregwu Viking Ship Museum. Adreesị: Huk Aveny 35. Kemgbe 1931, nchịkọta ụgbọ mmiri na-atọ ụtọ anya ma na-achọ nchọpụta turistov.Ekspozitsiya bụ ụgbọelu 3, nke e wuru na 9th narị afọ, ma dina n'elu mmiri ahụ karịa 1,000 afọ.
Munch Museum. Adreesị: Toyengata, 53. Ụlọ ihe ngosi nka anakọtara banyere ihe ngosi 28,000, akwụkwọ akụkọ, eserese na ihe ndị metụtara ndụ onye na-ese ihe. Ndị nleta n'okpuru 18 na-enweghị ọnụ ụzọ maka ụlọ ihe ngosi nka. N'ebe a, gosi ihe nkiri banyere ndị na-ese ihe nkiri na egwuregwu.
Ogige ntụrụndụ "Tusenfrid". Adreesị: Hoyungsletta, 1407 As (ọ bụ ihe dịka 20 kilomita si Oslo). N'ime ogige ntụrụndụ a enwetawo aha ọma nke ogige ntụrụndụ dị egwu na Scandinavia. Ọ bụrụ na ị nwere akwara nke ígwè, anyị nwere ike ikwu na ị na-anwale "Speed ​​Monster": ụgbọ ala nke nwere ikike nke 6,000 horsepower ga-emepe ọsọ nke 90 km / h na naanị 2 sekọnd na rally 7 ugboro ị ga-ahụ onwe gị na steeti nke abaghị uru. E nwekwara ogige mmiri, ihe nkiri ụmụaka na ọtụtụ ụlọ ahịa.
Park "Gustav Vigeland." Adreesị: Nobels ọnụ ụzọ 32. Ị na-ahọrọ ịtụle ihe oyiyi ahụ n'èzí? Mgbe ahụ nhọrọ a ị zuru okè. N'ebe a, n'etiti osisi ndị a manicured na ebe mara mma ị ga-ahụ ihe osise 212 nke granite na ọla.
Ụlọ Ụlọ Nzukọ. Adreesị: Fridtjof Nansens plass. Ime ụlọ akụkọ ihe mere eme na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị. Ebe ọ bụ na 1990 e mere ebe a onyinye Nobel. N'ime ụlọ ahụ, ị ​​ga-ahụ ezigbo mma nke ụlọ, ihe osise dị mma na frescoes siri ike.
Ezigbo mmasị banyere Norway na Norwegians
Norway bụ obere obodo - naanị ihe dị ka nde mmadụ 5. Akụ akụ bụ isi nke Norway - mmanụ. A chọtara ya na 1969 ma si ebe ahụ gaa na Europe;
Paperclip mepụtara na patented na Norwegian Johan Valer;
Ihu igwe na Norway na-agbanwe na ọsọ ọsọ. Ọbụna okwu dị mkpa: "Enweghị m ihu igwe anyị? Ọ bụghị nsogbu, echere oge 15 ";
«Brunost» - agba agba aja aja, otu n'ime ihe ụtọ kachasị mmasị na mba a;
Ọnụ ọgụgụ ụmụ n'ime ezinụlọ ebe a bụ akara kachasị mma nke ọdịmma. Ọnụ ọgụgụ nke ụmụaka n'ime ezinụlọ - ọnụ ọgụgụ atọ;
Uwe agha nke eze nwere ike gụọ motto "All for Norway";
Ahịa nke 5 na 7 puku euro, ma ụtụ isi na mba a dị elu, ngwaahịa ndị dị oke ọnụ, ọbụna ọrụ dị oke ọnụ (taxis, nrụzi, wdg);
"Mmiri mmiri" (Latin maka "mmiri na-enye ndụ") - ihe ọṅụṅụ mmanya na-aba n'anya na 35 - 50% na-etinye mmanya na-aba n'anya, na-enye ya nri ruo ọtụtụ afọ (cumin, coriander, fennel, anise, cinnamon, fennel, St. John's wort). Ma ka ị ghara ịṅụ mmanya. A na-ere ya na ụlọ ahịa pụrụ iche "Vinmonopolet". Netwọk netwọk alkomarketov bụ nke ala ahụ na-arụ ọrụ na ụbọchị izu.
Norway na map nke Europe
0.1 Ịgba chaa chaa na Norway na Norway
0.2 Ndepụta nke saịtị 10 Norwegian Online Casino
2.1 Egwuregwu ebe nrụọrụ weebụ na-anabata ndị ọrụ si Norway
3 Ịgba chaa chaa na Norway
3.0.1 Akụkọ mkpirikpi nke Norway
3.1 Ịgba chaa chaa na Norway
3.1.1 Oslo ebe nkiri
3.1.2 Ezigbo mmasị banyere Norway na Norwegians
3.1.3 Norway na map nke Europe